အစားအသောက်လည်းကောင်း နေရာလည်းကောင်းတဲ့ J5 Bar and Grill | Warmae.com Blog
ဆိုင်မှာအဓိက ရောင်းချတဲ့အစားအစာက အနောက်တိုင်း အစားအစာနဲ့ ထိုင်းအစားအစာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းက ၄၅၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတယ်။ အဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ Favourite ကတော့ ကက္ကတစ်ငါးကိုကြော်ပြီး Tom Yam Sauce ဆမ်းထားတဲ့ Tom Yam Seabass (၈၅၀၀ ကျပ်) ။ အရသာ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်နဲ့ ခံတွင်းတော်တော် တွေ့ခဲ့တယ်။
နောက်တစ်ခု recommend ပေးချင်တာကတော့ Honey Pork Ribs (၈၅၀၀ ကျပ်) ။ ၀က်နံရိုးကို ကင်ပြီးမှ ပျားရည်းနဲ့ နှပ်ထားတာလို့ ပြောပြတယ်။ ပျားရည် ချိုချိုလေးနှင့် ၀က်နံရိုးက တော်တော်လေးလိုက်ဖက်တယ်ခင်ဗျ။ နောက်ပြီး ပျားရည်ကြောင့်ပဲလားမသိ အသားကပိုပြီးနူးသွားတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
Cocktail အပိုင်းမှာတော့ ဆိုင် recommand ပေးထားတာက Vodka ၊ နဂါးမောက်သီး တို့ ရောဖျော်ထားတဲ့ Dragon Fly(၅၀၀၀ကျပ်) ။ အ၀င်နည်းနည်းခက်ပေမဲ့ အရသာ အဆန်းလေးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆိုင်မှာက ည ၄နာရီ ကနေ ၈နာရီ အတွင်း Heineken Beer “buy two get one” ရတယ်ဗျ။
လိပ်စာ- Room I,J.Building No. 4. Wingabar Street.Bahan Township
ဖုန်း- 09 513 5660